Soo Iibso bariis khamiir casri ah Hplc≥98% - Wisdompowder
Red Yeast Rice ayaa Shiinaha u adeegsaday ilaa 800 AD si kor loogu qaado caafimaadka wadnaha. Waxay si wax ku ool ah hoos u dhigeysaa heerka dufanka leh ee loo yaqaan 'LDL' (xun). Rice-khamiirka cas waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dhibaatooyinka caloosha iyo waxyaabo dheefshiidka ku dhaca.
Bariiska khamiirka cas Extract video
Macluumaadka Saldhigga bariiska khamiirka cas
magaca Bariiska khamiirka cas Extract
xagiisayna Monacolin K 0.4% -5.0%
Magaca kiimikada statin
Isku mid ahaanshaha Lovastatin, Monacolin K, Raayada Monascus Red Rice, Rice khamiirka casaanka ah, Rice khamiirka cas
Formula kelli C24H36O5
Miisaanka kelli 404.54
Muhiimadda InChI PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Imaanshaha Budada casaanka madow
Nolosha badh 2 saacadaha 5
milmi Biyaha adkaanta (1.3 µg / mL biyo ah)
kaydinta Xaaladda Waxaa lagu keydiyay weel si wanaagsan u xiran oo ka fog qoyaanka iyo iftiinka
Codsiga MWaxay kaa caawinayaan yareynta dhowr arrimood oo halista ku ah dheef-shiid kiimikaadka, oo ay ku jiraan heerarka sare ee kolestarol, dhiig karka iyo sonkorta dhiigga, iyo sidoo kale miisaanka jirka oo xad-dhaaf ah
Khamiirka cas ee Bariiska Soo-saar Guud Ahaan
Bariiska khamiirka cas waa nooc ka mid ah bariis la kariyey oo la soo saaray iyadoo la adeegsanayo noocyo gaar ah oo caaryada.
Waxaa loo isticmaalay dawada dhaqameed ee Shiinaha qarniyadii hore guryaheedii adkeynta caafimaadka.
Bariiska khamiirka cas waxaa ku jira maadada monacolin K - isla agabkii firfircoonaa ee laga helay dawooyinka hoos u dhigaya kolesteroolka hoos loo dhigo sida lovastatin (1Treeded Source).
Sababtaas awgeed, waxaa badanaa loo adeegsadaa beddel kharash-ku-ool ah oo loogu talagalay daawooyinka qiimaha leh si loo yareeyo heerarka kolestaroolka iyo taageerada caafimaadka wadnaha.
Daraasadu waxay muujisay saameyn kale oo faa'iido leh sidoo kale, laga soo bilaabo koritaanka unugyada kansarka oo hoos loo dhigay illaa sonkorta dhiigga oo fiicnaatay iyo heerarka insulinta.
Maanta, bariiska khamiirka cas ayaa caadiyan loo iibiyaa sidii kaash-ka-iibsasho-ka-iibsasho oo suuq ahaan loo suuqgeeyo gacan ka geysato maareynta kolestaroolka iyo wanaajinta caafimaadka guud.
Bariiska khamiirka cas ee Soo-saar Taariikhda
Isticmaalka diiwaangelinta ee bariiska khamiirka guduudan wuxuu dib ugu laaban yahay farmashiyaha Shiinaha, Pen-ts'ao Kang-Mu (AD 1596), oo la daabacay xilligii Boqortooyadii Ming. Noocyada caaryada casaanka M. purpureus waxaa laga yaabaa in lagu beero waxyaalaha ay ka kooban yihiin istaarijka. Cunnooyinka la sheegay iyo qiimaha daawada ee noocyada ayaa dib ugu soo laabtay 800 AD. Sanadkii 1884, saynisyahano reer Holland ah ayaa darsay fangaska 'Monascus' kadib markay ogaadeen isticmaalkiisa dadka tuulada jasiiraddii gumeystaha ee Java. Waxaa kalasoocay oo magacaabay dhaqtarka cilmiga botaniska ee faransiiska Philippe Van Tieghem.4 Bariiska khamiirka cas waxaa laga soo qaatay bariiska loo ogolyahay inuu ku khamiisto khamiirka M. purpureus. 1895, noocyada M. purpureus waxaa laga soocay koji cas, oo loogu magac daray midabka guduudka ah ee dhaqanka.
Bariiska khamiirka cas waxaa loo adeegsaday daawada Shiinaha si loo xoojiyo beeryarada, kor loogu qaado ama loo hagaajiyo dheefshiidka, looga takhaluso qoyaanka iyo xaakada, kor loogu qaado ama loo wanaajiyo wareegga dhiigga, loona saaro istaagga dhiigga. Intii lagu guda jiray Boqortooyadii Ming, bariis khamiir casaan ah ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa "dhadhan macaan oo diirran hantida." Nooca 'Monascus' waxaa loo isticmaali jiray qarniyo Aasiya inuu yahay isha midabaynta midabaynta cuntooyinka dhaqameed. Astaamaha dawada ee bariiska khamiirka casaanka ah ayaa lagu qiimeeyaa Aasiya oo dhan, noocyada sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo khamriga bariiska iyo cunto ilaaliye ahaan loogu ilaaliyo midabka iyo dhadhanka kalluunka iyo hilibka. Codsiyada cuntada ganacsiga waxaa ka mid ah midabaynta sausage, hams, surimi, iyo ketchup yaanyo. Midabkani wuxuu leeyahay taariikh dheer oo loo adeegsado inuu ka kooban yahay cunnada macaamiisha Aasiya, laakiin kuma xirna Yurub ama Mareykanka. Si kastaba ha noqotee, daraasad ayaa diiwaangelineysa diiwaangelinta shatiyado badan oo hela isticmaalka Monascus oo ah midab cunno leh oo ku yaal Japan, Mareykanka, Faransiiska, iyo Jarmalka. Intaa waxaa sii dheer, waxaa loo isticmaalay in lagu wanaajiyo dhadhanka cuntada ee dalalka Aasiya.
Bariis khamiir ah Soo Saari Mechanism Of Action
Bariis khamiir cas waxaa ku jira maadada monacolin K, oo ah kolestarool ka -hortagga kolestaroolka. Waxay awood u leedahay inay hoos u dhigto wax soo saarka kolestaroolka beerka. Si ka duwan dawada hoos u dhigista kolestaroolka, oo sababi karta waxyeelo daran, bariiska khamiirka cas ayaa si fiican loogu dulqaadan karaa.
Monacolin K oo bariis khamiir cas leh waxay gacan ka geysaneysaa sii wadidda heerarka kolestaroolka caadiga ah ee dhiigga
caadi, oo laga soosaaray
vegan, oo aan lahayn wakiilada kahortagga bakhaarka
Codsiga Soosaarista khamiirka cas
Cilmi baarista badankood waxay diiradda saartaa M. purpureus oo ah isha dabiiciga ah ee lovastatin, sidaa darteed, waxay leedahay saameyn waxtar leh daaweynta hyperlipidemia. Caddayntu sidoo kale waxay u jirtaa saameynta bakteeriyada bakteeriyada iyo daawada xinjirowga lidka ku ah, iyo sidoo kale waxqabadkeeda ku saabsan dheef-shiidka kiimikaad.
Waana suurtagal inay wax ku ool u ahaato
Qaadashada 1.2 garaam oo bariis khamiir cas ah maalin kasta celcelis ahaan celcelis ahaan 4.5 sano waxay yareysaa halista weerarada wadnaha iyo dhimashada dadka leh taariikh wadne qabad.
Heerarka aan caadiga ahayn ee dufanka dhiigga ee dadka qaba HIV / AIDS.
Qaadashada bariiska khamiirka cas waxaad moodaa inay yareynayso kolestarol iyo heerarka triglyceride dadka qaba cudurka HIV.
Bariis khamiir casri ah Soosaarso cilmi baaris dheeraad ah
Bariiska khamiirka cas waxaa lagu heli karaa kaabsal ama qaab kiniin ah oo inta badan loo habeeyay iyada oo lagu daro waxyaabo kale, sida CoQ10, nattokinase ama acids omega-3 ee dufanka leh.
Kaabayaashaan ayaa si ballaaran looga heli karaa dukaamada cuntada caafimaadka, farmasiyada iyo in kasta oo tafaariiqda internetka laga helo.
Qiyaasood oo u dhexeeya 200 - 4,800 mg ayaa lagu bartay tijaabooyinka caafimaad, sida caadiga ah waxaa kujira 10 mg oo wadarta guud ee monacolin (18T kalsoonida isha).
Badeecadaha waaweyn ee waaweyn ee suuqa guud ahaan waxay ku taliyaan in la qaato inta u dhaxaysa 1,200 - 2,400-XNUMX mg maalin kasta, oo loo qaybiyaa laba illaa saddex qaadasho.
Si kastaba ha noqotee, marka la eego halista waxyeelooyinka aan wanaagsanayn iyo walaacyada amniga la xiriira ee bariiska khamiirka soo baxa, waxaa fiican inaad lahadasho takhtarkaaga si loo go'aamiyo qiyaasta ugu fiican adiga.
Tixraac Bariis khamiir cas ah
Hsieh PS, Tai YH. Soosaarka Aqueous ee Monascus purpureus M9011 ayaa ka hortagaysa oo dib uga laabanaysa dhiig karka dhiiga u leh fayraska. J Cunnooyinka Cuntada Beeraha. 2003; 51 (14): 3945-3950.12822928
Shi YC, Pan TM. Caaryada casaanka, sonkorowga, iyo walaaca sunta ka dhasha: dib u eegis. Appl Microbiol Biotechnol. 2012; 94 (94): 47-55.22382167
Bianchi A. Soosaarayaasha Monascusus purpureus ee ka baxsan statins-profile hufnaanta iyo amniga isticmaalka dheecaannada Monascus purpureus. Chin J Integr Med. 2005; 11 (4): 309-313.16417786
Nigella Sativa Soo Saarista (490-91-5)